I-trailer kaMetflix 'Midnight Mass' yeNetflix Idalula Ukwesaba Edolobheni Lasogwini - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-trailer kaMetflix 'Midnight Mass' yeNetflix Idalula Ukwesaba Edolobhaneni Lasogwini
I-trailer kaMetflix 'Midnight Mass' yeNetflix Idalula Ukwesaba Edolobhaneni Lasogwini
by UTrey Hilburn III September 8, 2021
by UTrey Hilburn III September 8, 2021 19,169 ukubukwa
I-trailer yokunikezwa okulandelayo kukaMike Flanagan weNetflix elandelayo Ukuqothulwa kweNdlu yaseHill no-Tyena Haunting of Bly Manor kugcine lapha! IMisa laphakathi kwamabili ibukeka iyidozosi futhi. Ngokuqinisekile inayo uStephen King Izinto ezidingekayo ama-vibes afafazwe ezindaweni kuyo yonke i-trailer. Ngingumlandeli omkhulu wamabhayisikobho asogwini asogwini akude, izinto eziningi ezingahamba kabi zinganqunywa empucukweni. I-trailer ayisishiyanga phansi, isinike imfihlakalo eyanele nenyama ukusigcina silambele okunye. Ngenhlanhla, akudingeki silinde isikhathi eside. IMisa laphakathi kwamabili ifika ku-Netflix ngokuhamba kwesikhathi kule nyanga.
Amazwibela we IMisa laphakathi kwamabili kuhamba kanjena:
Inganekwane yomphakathi oyisiqhingi omncane, ohlukanisiwe ohlukanisayo osuvele ukhuliswa ukubuya kwensizwa ehlazekile (uZach Gilford) kanye nokufika kompristi onekhono (Hamish Linklater). Lapho ukubonakala kukaBaba uPaul eCrockett Island kuqondana nemicimbi engachazeki futhi ebonakala iyisimangaliso, intshiseko yenkolo evuselelwe ibamba umphakathi - kepha ingabe lezi zimangaliso ziza ngentengo?
IMisa laphakathi kwamabili izinkanyezi uKate Siegel, uHenry Thomas, u-Annabeth Gish, uRobert Longstreet, u-Alex Essoe, uMichael Trucco, uSamantha Sloyan, uRahul Abburi, uCrystal Balint, uMat Biedel, uRahul Kohli, uKristin Lehman, u-Igby Rigney no-Annarah Cymone.
Ingabe ujabulile ukubona IMisa laphakathi kwamabili? Sazise esigabeni sokuphawula.
IMisa laphakathi kwamabili iphuma ngeNetflix kusukela ngoSepthemba 24.